March 2019 – Page 2 – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Madaxda DFS oo ku fashilmay qorshe ay ku doonayeen Madaxda dawlad gobaleedyada in ay isku keenen Muqdisho, Maxaase keenay?
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar hoose oo ay heshay Warbaahinta Puntlandtimes.com waxay daaha ka rogayaan in ay Madaxda dawlad gobaleedyada intooda badan ay iska diideen in ay […]
AKHRISO: Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir oo Digniin adag u diray Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, kuna tilmaamay.
MUQDISHO(P-TIMES)- Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ee mucaaradka ku ah Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag uga hadlay Ajendaha koowaad ee kalfadhiga baarlamaanka Faderaalka, […]
Madaxweynaha Puntland oo saaka Daah-furaya Wajiga labaad ee dhismaha wadada Ceel-Daahir & Ceerigaabo?
CEEL-DAAHIR(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa markii ugu horeysay daah-furayaa Mashruuca wajiga labaad ee Laami-saarida wadada Ceel-Daahir iyo Ceerigaabo, wuxuuna ka daah-furayaa deegaanka CeelDaahir […]
March 30, 2019 Shiine Ali
Madaxweyne Deni oo caawa ku sugan magaalada Carmo ee G. Barri, kana dhabeeyey?
March 29, 2019 W LAASCAANO
CARMO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku jira safarkiisii koowaad ee uu ku marayo gobalada Puntland, gaar ahaana gobalka Barri ayaa galabtay gaaray […]
DAAWO: M/weynaha Puntland oo ka hadlay arrimaha la dagaalanka Al- Shabaab, kuna dhawaaqay qorshe cusub.
WAACIYE(P-TIMES) – Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo maanta Salaadii Jimcaha la tukaday shacabka degmada Waaciye ee gobalka Karkaar, ayaa ka hadlay qorshaha Xukuumadiisa […]
WARBIXIN: Madaxweynaha Puntland oo kuwajahan Boosaaso, Maxayse ka sugayaan Shacabka magaaladaas?
BOOSAASO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa kusii jeeda magaalada Boosaaso ee xudunta Ganacsiga Puntland oo ay ka jiraan dhibaatooyin amni-darro, kuwaas oo halakeeyey ganacsiga […]
Madaxweynaha PL oo ku sii jeeda magaalada Carmo ee G. Barri, lana kulmaya.
CARMO(P-TIMES)- Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa lafilayaa in uu maanta gaaro magaalada Carmo ee gobalka Barri, isagoo halkaas kula kulmi doona waxgaradka iyo qeybaha […]
XOG RASMI AH: Maxaa ka soo baxay kulan deg deg ah oo ay xalay yeesheen Farmaajo, Kheyre & Fahad Yaasiin?
MUQDIHSO(P-TIMES) – Wararka laga helayo Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in ay xalay kulan deg deg ah oo qaatay saacado badan yeesheen Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, […]
DAAWO: Shacabka Degmada Burtinle oo dhisanaya Laami ay lacagtooda ku bixinayaan, qabanaya Shaqadii Dawladda.
BURTINLE(P-TIMES)- Shacabka magaalada Burtinle ee gobalka Nugaal ayaa markii ugu horeysay dibu dhis baaxad weyn ku bilaabay laamiga dheer ee dhexmara bartamaha magaaladaas, oo burbursanaa […]
XOG: Maxay ka wada hadleen M/weyne Deni & Waxgaradka G, Karkaar oo yeeshay kulan gaar ah?
March 28, 2019 W LAASCAANO
QARDHO(P-TIMES)- Madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo kusugan magaalada Qardho ee gobalka Karkaar, ayaa kulamo gaar-gaar ah la yeeshay Odayaasha dhaqanka ee gobalkaas oo […]
AKHRISO: Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir muxuu ka yiri qaraxyada faraha badan ee ka dhacay Muqdisho, Yuuse Eedda saaray?
MUQDISHO(P-TIMES)- Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ee Mucaaradka ku ah dawladda Faderaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si adag ugu dhaliilay dawladda Faderaalka, in ay ku guuldareysatay […]